You are here: Products & Services >> Our Apps (Free) >> Routing Map
ဒီ လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ ဆော့ဝဲကတော့ ရိုးရှင်းပြီး သုံးရတာ လွယ်ကူတဲ့အတွက် အိုင်တီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုမှ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ မြို့တမြို့ဆီကို ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းရှိတဲ့ဆီကို သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမြို့ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းရှိနေတဲ့ တည်နေရာ သိဖို့လိုတယ် မဟုတ်ပါလား။ အဲဒီ တည်နေရာကို လတ္တီကျု၊ လောင်ဂျီကျု နဲ့ သပ်မှတ်ဖော်ပြလေ့ရှိကြပါူတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆီကိုပဲ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းက လာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာကို သွားချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီရဲ့ တည်နေရာ လတ္တီကျု၊ လောင်ဂျီကျုကို သိမှ မြေပုံအသုံးပြုပြီး သွားရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ ဆော့ဝဲထဲက မြေပုံဆိုတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ နေရာကို မြေပုံပေါ်မှာ ရှာပြီးတော့ နှိပ်လိုက်ရင် နာမည်နဲ့တကွ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကို သိမ်းထားသည့် နေရာများဆိုတဲ့ ကဏ္ဍထဲမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး လိုအပ်သလို မြေပုံနဲ့ ပြန်ကြည့်တာ၊ အချင်းချင်း မျှဝေတာ၊ ပြင်ဆင်တာနဲ့ ပယ်ဖျက်တာတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရောက်နဲ့တဲ့ တည်နေရာကို ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပေးပို့ပါ သင့်တည်နေရာဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကို အသုံးပြုပြီး ဝက်ဆိုက်လိပ်စာ ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရိုးရိုး လတ္တီကျု၊ လောင်ဂျီကျုနဲ့ ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြားသူဆီကနေ လတ္တီကျု၊ လောင်ဂျီကျု ပေးပို့လာတာကို မြေပုံပေါ်မှာ ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထည့်ပါ တည်နေရာ ကဏ္ဍကို အသုံးပြုပြီး မြေပုံမှာ ပြန်ကြည့်တာ၊ ဆော့ဝဲထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာ၊ လမ်းကြောင်းဆွဲတာတို့ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနေရာမှ တခြားနေရာသို့ ကဏ္ဍမှာတော့ မိမိ ရှိနေတဲ့ တည်နေရာကနေပြီး မြို့နယ်တစ်ခုခုဆီ လမ်းကြောင်းဆွဲမလား ဒါမှမဟုတ် သိမ်းထားတဲ့ တည်နေရာတစ်ခုခုဆီ လမ်းကြောင်းဆွဲမလား ဒါမှမဟုတ်သေးရင် ရရှိလာတဲ့ လတ္တီကျု၊ လောင်ဂျီကျု တည်နေရာဆီ လမ်းကြောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ပါ နေရာ ၂ ခု ကဏ္ဍမှာတော့ သိမ်းထား၊ ရှိပြီးသား မြို့နယ်တွေထဲကပဲ ရွေးချယ်ပြီး လမ်းကြောင်းဆွဲမလား ဒါမှမဟုတ် မြေပုံမှာ မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နေရာ ၂ ခုကို ထောက်ပြီး လမ်းကြောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်။
အနီရောင်အစက်ပါတဲ့ လမ်းကြောင်းသိမ်းဆည်းရန် ကဏ္ဍမှာတော့ မိမိတို့ မသိတဲ့ နေရာတစ်ခုကို သွားရောက်တဲ့ အခါ လမ်းကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ သိမ်းထားသည့် လမ်းကြောင်းများ ကဏ္ဍမှာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ၂ ဘာသာ ကြိုက်တာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ မြန်မာဘာသာနဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း ယူနီကုတ်၊ ဇော်ဂျီ ကို မိမိတို့ ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတာကို ရွေးပြီး သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ App အေပီကေ ဒေါင်းမယ်.
Routing Map isasimple app intended for those users who are entry level. The app is easy to use and it is not complicated usingamap, saving the desired location and navigating to it.
First of all, you can save any location related info in the app by either usingamap on your own. Or you can get any latitude and longitude numbers sent by your friends and save them into your app for later uses.
If so, you can share them with others again and easily drawarouting line on the map to take you to your desired place. And the app hasalist of townships in Myanmar which is available in Myanmar and English language. So, you won't need to worry about how to get to the town and at least you will get to the town. And don't forget to turn on GPS on your phone.
Another great feature is called recording route. Yes, you can record any routes by tapping on the start button and give the desired title for your route.
Click the picture or here to download Routing Map.